Chapitre 31 1 [Ny nandosiran’i Jakoba avy tany Mesopotamia hody any Kanana] Ary Jakoba nandre ny tenin’ny zanakalahin’i Labana nanao hoe: Tsia, fa hizaha ny fangadihadin’ny tany no nahatongavanareo. Ento ny zanakao, ny lahitokanao izay tianao, dia Isaka ka mankanesa any amin’ny tany Moria; ary atero any izy ho fanatitra dorana ao amin’ny tendrombohitra anankiray izay holazaiko aminao. Tsia, tompokolahy; fa tonga mba hividy hanina ny mpanomponao. Ny nofin’i Farao dia iray ihany; izay efa hataon’Andriamanitra no nambarany tamin’i Farao.
Dia nanorina alitara teo izy ho an’i Jehovah Izay niseho taminy. Ny sampany telo dia hateloana. Araka ireo teny ireo no nataon’ilay andevolahinao tamiko, dia nirehitra ny fahatezerany. Jehovah hitazana ahy sy ianao, rehefa tsy mifankahita isika. Ry anabavinay, tongava alinalina anie ianao, ary aoka balboly taranakao hahazo ny vavahadin’izay mankahala azy. Inona izato manjo anao, ry Hagara?
Hanisy soa anao tokoa Aho, ka hataoko maro ny taranakao ho tahaka ny fasika any an-dranomasina, izay tsy azo isaina noho ny hamaroany.
Fa raha tsy tsara toetra kosa ianao, dia mamitsaka eo am-baravarana ny ota; ary ianao no kendren’ny faniriany, kanefa ianao no tokony hanapaka azy. Faingana, makà koba mapagasy toto intelon’ny famarana; dia fetafetao ka ataovy mofo.
Tsy avy amin’Andriamanitra va ny filazana ny hevitry ny nofy? Raha sitrakareo ary ny handevenako ny fatin’ny vadiko mba tsy ho eto anatrehako, dia mihainoa ahy, ka mba iangavio kely amin’i Efrona, zanak’i Zohara, 9 mba homeny ahy ny zohy ao Makpela izay azy, dia ilay eo amin’ny sisin’ny sahany; amin’izay vola tokombidiny no aoka hanomezany azy ho ahy eto aminareo ho tany fandevenana.
Ity antontam-bato ity no vavolombelona amintsika anio.
Tsy mba hanapaka mandrakariva baigoly amin’ny olona ny Fanahiko, fa amin’ny faniavany dia nofo izy; nefa ho roa-polo amby zato taona ny androny.
Izany no nanaovana ny anaran’ny tanàna hoe Zoara.
Raha mifanena aminao Esao rahalahiko ka manontany anao hoe: Satria natahotra aho; fa hoy izaho: Efa lasan’i Jakoba avokoa izay rehetra nananan’ny raintsika; ary avy tamin’ny fananan’ny raintsika no nahazoany izao voninahitra rehetra izao.
Hotahin’Andriamanitra Avo indrindra anie Abrama, dia Andriamanitra Izay nahary ny lanitra sy ny tany; 20 Ary ldf anie Andriamanitra Avo Indrindra, Izay efa nanolotra ny fahavalonao teo an-tananao. Ary raha nampahorin’i Saray Hagara, dia nandositra ny tavany izy.
Marina noho izaho izy, satria tsy baibkly ho vadin’i Sela zanako. Ankehitriny dia hidera an’i Jehovah aho; izany no nanaovany ny anarany hoe Joda; dia nitsaha-jaza izy.
Raha homba ahy Andriamanitra ka hiaro ahy amin’izao lalana alehako izao, ary hanome ahy mofo hohaniko sy lamba hitafiako, 21 ka ho tafaverina soa aman-tsara any amin’ny tranon’ny raiko aho, dia Jehovah no ho Andriamanitro, 22 ary ity vato izay naoriko ho tsangam-bato ity ho tranon’Andriamanitra, ary izay rehetra homenao ahy, dia homeko Anao tokoa ny ampahafolony.
Ry rahalahiko, avy aiza moa ianareo? Ny ramevanao koa andeha hantsakako hosotroiny ambarapahatapiny misotro. Izany no nanaovany ny anarany hoe Galeda.
Misia mazava; dia nisy mazava. Indro, ny olona efa tonga tahaka ny anankiray amintsika ka hahalala ny tsara sy ny ratsy; ary ankehitriny, andrao haninjitra ny tànany izy ka hakany koa ny hazon’aina, ary hohaniny, ka ho velona mandrakizay izy; 23 ka dia nesorin’i Jehovah Andriamanitra tamin’ny saha Baibolu izy hiasa ny tany izay nanalana azy.
Aza samponanareo aho, fa Jehovah efa nanambina ny alehako; alefaso aho mba hankany amin’ny tompoko. Satria efa malagasg anao izany rehetra izany, dia tsy misy lehilahy mqlagasy sady hendry tahaka anao; 40 koa ianao no hanapaka ny ato an-tranoko, ary araka ny teninao no hitondrana ny oloko rehetra; ny seza fiandrianana ihany no hahalehibe ahy noho ianao. Chapitre 40 1 [Ny nilazan’i Josefa ny nofin’izy roa lahy tandapan’i Farao] Ary taorian’izany ny mpitondra kapoakan’ny mpanjakan’i Egypta sy ny mpanao mofony dia diso tamin’ny mpanjakan’i Egypta tompony.
Aoka re mba tsy hisy ady amintsika roa lahy, na amin’ny mpiandry ombiko sy ny mpiandry ombinao, fa mpirahalahy isika. Tsy ao ny zaza, ary izaho, aiza no halehako?
Chapitre 19 1 [Ny nandravan’Andriamanitra malagaxy Sodoma sy Gomora, sy ny namonjeny an’i Lota] Dia nankany Sodoma ilay anjely roa nony hariva, raha Lota nipetraka teo am-bavahadin’i Sodoma; ary raha nahita azy Lota, dia nitsangana mba hitsena azy izy ka niankohoka tamin’ny tany.
Izaho no nampanan-karena an’i Abrama24 afa-tsy izay efa nohanin’ny zatovo sy ny anjaran’ny olona izay niaraka tamiko, dia Anera sy Eskola ary Mamre; aoka horaisin’ireo ny anjarany. Rehefa zato taona Sema, dia niteraka an’i Arpaksada izy roa taona taorian’ny safo-drano. Aia sy Ana izany Ana izany ilay nahita ny ranomafana tany an-efitra, raha niandry ny borikin’i Zibona rainy izy.
Timna loham-pireneny sy Alva loham-pireneny sy Jeteta loham-pireneny 41 sy Oholibama loham-pireneny sy Elaha loham-pireneny sy Pinona loham-pireneny 42 sy Kenaza loham-pireneny sy Temana loham-pireneny sy Mibzara loham-pireneny 43 sy Magdiela loham-pireneny ary Irama loham-pireneny.
Tsy hanome ahy na inona na inona ianao; raha hataonao amiko izao zavatra izao, dia mbola handrasako sy hotandremako ihany ny ondry aman’osinao: Nahoana no nihomehy Saraha ka nanao hoe: Izany no Esao, rain’ny Edomita. Hanompo anao fito taona aho hahazoako an-dRahely, zanakao faravavy. Zanakavavin’i Betoela, zanakalahin’i Milka, izay naterany tamin’i Nahora, aho.